Waxaad hadda isku dayi kartaa beta -ga dadweynaha ee WhatsApp Desktop -kaaga Mac -kaaga | Waxaan ka imid mac
Waxaan ugu dambeyntii ku raaxeysan karnaa WhatsApp Waxaan ku rakibay Mac -gayga Waxaan kaliya ku rakibay beta -ga dadweynaha ee WhatsApp Desktop -ka macOS runtiina waxay tahay inay si fiican u shaqeyso. Waxaan isku mar u diri karaa oo ka heli karaa iPhone -kayga iyo Mackayga.
Dhammaan waa yaab. Muddo dheer oo la sugayey ka dib, WhatsApp ayaa ugu dambayntii sii daayay beta -kiisii ​​dadweynaha ee barnaamijkiisa desktop -ka maanta, labadaba macOS sida daaqadaha. Hadda waad rakibi kartaa.
Dhowr saacadood, WhatsApp waxay bilawday beta guud oo ah barnaamijkeeda desktop -ka dhammaan isticmaaleyaasha doonaya inay tijaabiyaan. Isticmaalayaasha MacOS iyo Windows hadda waxay iska qori karaan barnaamijka tijaabiyaha beta waxayna tijaabin karaan dhammaan astaamihii ugu dambeeyay ee ka imanaya barnaamijka Desktop WhatsApp.
Marka adeegsadayaashu isqortaan barnaamijka, waxay si rasmi ah u noqdaan tijaabiyeyaasha beta waxayna heli doonaan dhammaan cusboonaysiinta beta. si otomaatig ah. Hadda, nooca ugu dambeeyay ee adeegsadayaasha dadweynaha waa 2.2133.1.
Haddii aad rabto inaad isku daydo WhatsApp Desktop beta ee macOS, waad ka samayn kartaa Halkan. Kaliya waan rakibay waxayna ka shaqeysaa kaamil ah. Kaliya waa inaad soo dejisaa faylka dmg, ku rakibtaa Mac -kaaga, oo aad ku xiraa dalabkaaga iPhone -kaaga lambar QR.
Marka la rakibo, waa inaad sugtaa cusboonaysiin cusub adoo adeegsanaya OTA oo la bilaabi doono dhowaan iyada oo leh sheeko cusub oo muddo dheer la sugayay. Uma baahnid inaad iPhone -kaaga xirto ama ku xirnaato si WhatsApp -ka uga shaqeeyo Mac -gaaga. Waxaad moobaylkaaga dami kartaa oo aad sii wadi kartaa dirista iyo helista farriimaha codsiga desktop -ka.
Af-hayeenka WhatsApp-ka ayaa hore u xaqiijiyay in dalabka aaladaha badan la jaanqaadi karo iPadOS. Markaa, waxaan ku raaxaysan karnaa WhatsApp -ka labadayada iPhone, iPad ama Mac. Hadda waxaan u baahanahay oo kaliya inaan ogaano goorta ay sidoo kale ku imaan doonto Apple Watch -ka, oo aan dhammayn doonno xiridda goobada. Waxay noqon lahayd pear ... waxaan ula jeedaa ... tufaax.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Waxaad hadda isku dayi kartaa beta -ga dadweynaha ee WhatsApp Desktop -kaaga Mac -kaaga
Warkaan waxaan u fahmay inuu yahay been. Ma isku dayday xiriirkan? Ahaanshaha beta, wali waa barnaamij ku tiirsan iPhone. Ma ahan sida Telegram oo aan isticmaali karo aniga oo aan haysan iPhone -ka agtiisa.
waa sidaan!…. waa inaad sugtaa….
Pixelmator Pro waa la cusbooneysiiyaa oo wuxuu hagaajiyaa waafaqsanaanta Photoshop